Bvisa Discoloration | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "Bvisa Discoloration"
Bvisa Mazino Your echitema And Discoloration With Tips idzi
Kuwana mazino enyu semagada kunogona kuva dzinodhura uye nguva yakawanda. Pane nzira dzakawanda kuzvichenesa zvikadaro mazino. Kushandisa mazano aya unogona kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ari nyore fashoni.
Chinhu chokutanga unofanira kuitei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino yenyu nguva dzose kupinda mazino cleanings. Iva nechokwadi chokuti iwe kupinda biannual kuchenesa kusangana wako mazino hygienist. Zvinogona nani nyore chete ngazviitike kupfuura masikati mumwe uye kuronga pamusoro zvichida kwokugeza mazino kaviri sezvo zvakaoma mangwana, asi ndicho chinhu unofanira angaita. Regai hadzitedzemuki kamwe uye zvichida achawira tsika uri uye zvaenda shure padare mumwe.
ZANO! Iva nechokwadi kuti vadzivise kofi, waini uye fodya. zvigadzirwa izvi zvine makemikari erima kuti zvichaita chidodzi mazino ako.
Zvave achivaratidza kuti utsi hwefodya discolors mazino ako.
Zviri nyore kuwana mazino rakanga rachena rinoparadza, uye vava chipa. Simply nzvimbo kanyika pamusoro mazino enyu nguva yakapiwa mumirayiridzo, uye meno venyu vachanzwirwa whitened. micheka izvi inorapa kupa varombo zvawanikwa, uye apo vaishandisa kuva akakurumbira chaizvo, havana akatenga zvikuru nokuda vatengi.
ZANO! Mushure muchidya zvokudya kana kunwa ch, unofanira pakarepo kushandisa mvura kurigeza kubuda pamuromo wako. Izvi zvichakubatsira kuchengeta vakasara kubva staining mazino ako.
rakanga rachena Products
Floss uye kukwesha mazino enyu kanenge kaviri zuva. Izvi zvinobatsira here kurwisa nebheji pamberi anogona kuvaka uye kuti mazino enyu kutarisa bhowa uye rakabuda ruvara. Pane kubvumira nebheji pachigaro mazino enyu usiku hwose, kukwesha uye floss pamberi warara.
ZANO! Kuzvichenesa zvikadaro Meno ako wakasununguka chete mastrawberry. Mastrawberry vave vachizivikanwa kuti vabereke mazino machena.
Unogona kuva aikanganiswa mamwe mazino zviitwe zvigadzirwa tenuka. Zvinogona zvikuru zvinorwadza uye dzinogona kuva pfupi nguva asi achiri zvichirwadza. Kana kutambura utetsa ichi, kushanyira chiremba wemazino yako pamberi pako kuramba kushandisa chero zviitwe zvinogadzirwa. Anogona kutokurudzira chigadzirwa isingazotambudzwi pave mazino ako kuti nzira.
Get cheki-kubva chiremba wemazino wako nechokwadi kuti zvinokuchengetedzai kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Usatambise nguva yako uye mari achiedza panze musha ose rakanga rachena chigadzirwa. Kuvimba kwako chiremba wemazino Unyanzvi ari kure rikurumidze nzira yokuwana chigadzirwa unonyatsoshanda iwe.
ZANO! Kunwa mvura yakawanda iri nzira huru kubatsira kuchengeta mazino enyu chena. Kunwa mvura iri kakawanda hwaro kuchabatsira kuchengeta echitema kubva nokuumba uye achachengeta mazino ako chichangobva kumboshamba.
Ungafanira kuita izvi kakawanda kuwana mazino ako vosiya akasvibiswa chaizvo.
Kunwa kuburikidza ane uswa kunogona kuderedza zino staining kubva zvinwiwa. The uswa inobatsira mukuderedza panguva chinwiwa anofanira chidodzi mazino ako. The mvura anoenda ikarurama huro dzako pane dzokuona mazino ako.
ZANO! A mazino nyanzvi inogona kuwana yepamusoro unhu kunoguma kupfuura kana ukashandisa pamusoro pakaunda zvigadzirwa. Nzira iyi kwemeno rakanga rachena mari yakawanda, asi Zvinozoitika pakarepo.
chiremba wemazino Your angakwanisa kukupa mazano pamusoro pa-musha zviitwe Kits dzinobudirira tisingazvikuvadzi mazino ako kana matadza.
Tipei kuputa zvakanaka. Nepo kusvuta rave richizivikanwa kuti zvakaipa nokuda kwenyu utano uchitikurudzira, kuri zvakaipa nokuda mazino ako. Saizvozvo, ndeimwe pachena zviratidzo kuti munhu uchisvuta iri mazino avo yero. Zvingatiomera kuramba mazino machena apo kusvuta. Kurega kusvuta zvakaoma chaizvo, asi mudzanga ose paunozvidzivisa kungadzikira zvinokonzerwa pamusoro mazino ako.
ZANO! Vanotenga wemagetsi chikwesheso iguru nzira yokuwana mazino akachena. Electronic toothbrushes kubatsira kubvisa echitema kubva chikafu, waini uye nezvefodya zvikuru kwazvo kupfuura bhuku chikwesheso.
Kukwesha mazino enyu nguva dzose kana uine mukuru smile.Food nezvimwe zvinhu anogona kuvaka pamusoro mazino ako uye discolor mbeu kana chidodzi navo pashure dzimwe nguva. Haufaniri kuva nehanya discoloration chero bedzi nguva dzose kukwesha mazino enyu.
Watch chero aikanganiswa nemazino ako uye mazino paaishandisa rakanga rachena toothpastes kana micheka kumba. Kana izvi zvaitika, tsvaka zvinogadzirwa kuti havana peroxide zvakawanda maari. kazhinji, izvi zviduku divi anokonzerwa kuchatsakatika Mazuva mashoma pashure makatanga kushandisa chigadzirwa.
ZANO! Zivai kuti yakanyatsosarudzwa mazino ako rakanga rachena nzira Anoita. Unogona mwoyo kana kutarisira kupfuura zviitwe nzira inogona kununura.
Edza Kukwesha mazino ako nevamwe Strawberry muto. Iyi kumbonyanya zvakachipa nzira kuti ndiwane kunyemwerera iwe zvawagara.
Zino enamel Kunoumbwa chicherwa zvinhu anogona kudzivisa zvirwere remidzi nedzimwe ngozi anogona kukuvadza mazino. Vamwe makemikari zviitwe zvinogadzirwa, kusanganisira simba acids, zvinogona kukuvadza enamel yako uye kukonzera zvimwe zvinogara.
ZANO! Chinhu kwakapararira kugutsikana kuti kushandisa remoni uye madota muto ndivo nzira yakanaka yokuita mazino ako chichiwedzera, asi ichi handiye zvakadaro. Izvi handizvo sezvo vachiri ungagona kuzvichenesa zvikadaro mazino enyu zvishoma, ivo kuva nengozi uyewo.
Kana nokukurumidza uye kubudirira ndiwo yako pamusoro mazino-rakanga rachena pokutanga, unofanira kushanyira chiremba wako pakarepo. Rakanga rachena mazino ako hakusi nyore nguva dzose basa zvizorwa. Pasina kuona chiremba wemazino, iwe pangozi usachikanganisa mazino enyu kunanzvana utano mukuru pamusoro nguva.
Ivai nechokwadi kuti imi floss nguva dzose. Flossing zvikuru kunobatsira Dombo rokubvisa iyo, mukudzosa, zvinogona kubatsira kudzivirira staining mazino ako. Get netsika flossing zuva nezuva uye kutakura vamwe nemi kushandisa pashure wadya. Iva nechokwadi kuti floss mazino enyu pamberi yokurara kuitira kuti urege kuti mabhakitiriya kuramba mazino enyu usiku hwose.
ZANO! Edza kudya zvokudya crunchier. Mazino vanogona kuva chena kudya celery, maapuro uye makerotsi.
Rakanga rachena mazino matanga kunogona nzira huru kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Chenjerera migumisiro gel kana chauri kushandisa ngirozi nokuti raakashandisa imwe chibi. Unofanira kushandisa yambiro chete nzira iyi uye kuita chokwadi murege kuzviita kakawanda.
Sanganisa remoni muto uye tafura yomunyu mukaravhani zviitwe chigadzirwa. Chengeta musanganiswa chisimbiso mugaba, uye kurishandisa pamusoro nguva shoma kufunganya nezvazvo kujaidza.
ZANO! Mazino whiteners hazvifaniri kushandiswa kusvikira waita akarangana chiremba wemazino wako. Ungaona kuti mose zvaidikanwa ikapenya nevachena waiva rokutsvaira chakanaka.
Wemagetsi chikwesheso urinani nzira huru yakajeka kunyemwerera kwako. Electric toothbrushes mazino akachena zvakanaka uye anowanzoshandurwa kushandiswa kubvisa asingafungi discolorations pamusoro teeth.They yako kuchenesa kubvisa chero yeyero ruvara pachiso nzvimbo mazino ako.
Garai kure tea kofi kudzivirira staining mazino ako. zvinwiwa izvi discolor mbeu mazino kana ukanwa pavo vose.
ZANO! Mushure kudya dzinodzeya chingamu kuchengeta mazino ako chena uye yakachena. Kune mazino dzakawanda dzine zviitwe vamiririri zvichakupedzerai zvishoma nezvishoma kwechokwadi discolorations.
Usanyengedzwa nokuda toothpastes izvo kushambadzirwa mazino zviitwe. Vanogona kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, asi iwe unenge vanofanira kuzvishandisa pachiimbwa neimwe nzira. Kana uchida rakanga rachena mushonga wemazino, chandagwinyira munhu rine kubikira pasoda.
Unogona kuedza Kukwesha mazino ako kushandisa svuura ane mabhanana. Vakawanda vanowana ichi wemanomano nyore kuti kunobatsira chaizvo. Inotapukira mukati ari mabhanana svuura pamusoro mazino enyu kuzvichenesa zvikadaro. Zvadaro, kutevera pamwe nokugara Kukwesha. The rakanga rachena Migumisiro vachava pachena pakarepo.
ZANO! Tsvaka mazino rakanga rachena zvigadzirwa pachivanze wako panzvimbo chezvinodhaka. The bark pamusoro walnuts muti ichinyatsozivikanwa kubvisa echitema nemazino.
Kukwesha mazino enyu zvakananga pashure kumuka, uye pamunongopinda uchida kuenda kunorara kuona mazino enyu kuwana akachena.
Iva nechokwadi kuti haana kushandisa mazino rakanga rachena maitiro kana uri upi padanho pamuviri kana vari kuyamwisa. Pamuviri navanoyamwisa vanaamai nzwisisa zvikuru mazino. Pamusoro pe, ari mishonga inowanikwa zvinhu izvi vaigona kuva matambudziko. pachinzvimbo, woramba kunyemwerera rako rakajeka ane Kukwesha yakanaka uye flossing yokungoitawo munguva inokosha iyi. Unogona kugara vasarudze kuti mazino enyu whitened pashure yenyu pamuviri kana ukoti nguva yakakwana.
Ziva chii kutarisira kubva mazino ako rakanga rachena nzira chinoenda kukuitira. Unogona anopedzisira mwoyo kana zvauri kutarisira yakawandisa. Kumbira chiremba wemazino chii kutarisira.
Zino enamel inodzivirira mazino utachiwana remidzi nedzimwe ngozi anogona kukuvadza mazino. Products dzine yakakwirira acidity kana zvimwe chepfu zvinogona anokanganisa mazino ako kupfuura zvichava kuvabatsira.
Kuwana mazino machena uchida unogona kuva dzinodhura uye yakati ane dzichikunetsa. zvokushandisa zvakawanda uye dzinoshandiswa uko kukubatsira kuwana mazino akachena. Nokushandisa mazano aya, unogona kuwana mazino akachena pasina kushandisa mari yako pane nyanzvi rokugadzirisa.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:39 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: Bvisa Discoloration, Bvisa Mazino echitema, mazino echitema